China Jet Mill WP System - Agrochemical Field စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများသို့လျှောက်ထားပါ Qiangdi
အရည် - အိပ်ရာဂျက်စက်
QDF-400 WP အဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်မှုစနစ် ၄၀၀ ကီလိုဂရမ်
ဂျက်စက်စက်ရုံ WP စနစ် - Agrochemical Field သို့လျှောက်ထားပါ
WP-WDG စနစ် - Agrochemical နယ်ပယ်သို့လျှောက်ထားပါ
လူကြိုက်များသောအမျိုးအစား Fluidized-bed Jet Mill
GMP FDA အရည် - အိပ်ရာဂျက်စက်
မြင့်မားသော Hardness ပစ္စည်းများအတွက်အရည် - အိပ်ရာဂျက်စက်ကိုအထူးအသုံးပြုမှု
Disc အမျိုးအစား (UltrasonicPancake) ဂျက်စက်
1-10kg Capacity အတွက်ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး Fluidized-bed Jet Mill
ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး disc-type ဂျက်ကြိတ်ခွဲစက် QDB-50 QDB-100 QDB-150
Jet Micron Grader အမျိုးအစားခွဲခြင်း
ဂျက် Mil အဘို့အစိတျအပိုငျး
Fluidized-bed Jet စက်သည်အမှန်တကယ်ခြောက်သွေ့သော superfine pulverizing ပြုလုပ်ရန်မြန်နှုန်းမြင့်လေစီးကြောင်းကိုအသုံးပြုသည်။ compressed air ကြောင့်မောင်းနှင်သောကုန်ကြမ်းများသည်အပေါ်သို့စီးဆင်းသောလေအားဖြင့်ကြိတ်နယ်ဇုန်သို့သက်ရောက်မှုနှင့်ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်ရန်အတွက် nozz လေးခုဖြတ်ကျော်သည်အထိကုန်ကြမ်းကိုမြန်စေသည်။
Fluidized-bed Jet စက်ရုံသည်အမှန်တကယ်ထိုကဲ့သို့သောစက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်အဓိကကျသည့်စက်ထဲသို့ဆေးညွှန်းဖြင့်ကျွေးသောဖုန်မှုန့်များသည်အမျိုးအစားခွဲခြားသည့်intoရိယာအတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးအမြန်နှုန်းမှ centrifugal force ၏လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်အချင်းချင်းကြိတ်ဆုံနေရသည်။ စက်ဝိုင်းပုံဖော်စက်နှင့်လည်ပတ်ပန်ကာ၏အလယ်ဗဟိုတွင်ရှိသောအရည်အချင်းရှိသောအမှုန့်များကိုဆိုင်ကလုန်းနှင့်အိတ်စစ်ထုတ်စက်များကကောက်ယူသည်။
ပထမ ဦး စွာအစာကျွေးသောမှကုန်ကြမ်းအစာကျွေး - ပထမသုံးမီတာမှပစ္စည်းလွှဲပြောင်း3အရောအနှောရောနှောရန်ရောနှောခြင်းနှင့်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူများသည်နို့တိုက်ကျွေးနေစဉ်အတွင်းဖုန်မှုန့်များစုဆောင်းကာဒုတိယ ၃ မီတာကိုစုသိမ်းလိမ့်မည်3ရောနှောထားသောပစ္စည်းများကိုရောနှောထားပါ၊ ထို့နောက်ကြိတ်ခွဲရန်ဂျက်စက်ထဲသို့ထည့်ပါ၊ အမှုန်အရွယ်အစားကိုကွဲပြားခြားနားသောလည်ပတ်နှုန်းကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသောဘီး၏အရွယ်အစားကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ ကြိတ်ခွဲပြီးနောက်ပစ္စည်းသည်ပထမ ၄ မီတာထိပ်ရှိအကြမ်းအားဖြင့်ပန်ကာနှင့်ဖုန်မှုန့်စုစုပေါင်း၏အားဖြင့်မုန်တိုင်းသို့လွှဲပြောင်းပေးလိမ့်မည်။3 ရောနှောပြီးနောက်ဒုတိယ 4m လွှဲပြောင်း3 အထုပ်သို့မဟုတ် WDG စနစ်သို့လွှဲပြောင်းမတိုင်မီရောစပ်များအတွက်ရောနှော။
ဂျက်စက်စက်စနစ် - Agrochemical စီးဆင်းမှုအစီအစဉ်ကိုသုံးပါ
WP စနစ်သည်ဂျက်စက်စက်၏နည်းပညာကိုပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ၎င်းသည်ပိုးသတ်ဆေးများရောနှောခြင်းနှင့်ရောနှောခြင်းများအတွက်စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်နည်းပညာဒီဇိုင်းစွမ်းရည် (၁၀) ခုကျော်ရှိပြီးအမှုန့်လုပ်ငန်းတွင်နှစ် (၂၀) ​​ကျော်ကြာပါဝင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့်အပြင် pulverizing, ရောစပ်ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ Agrochemical WP / WDG ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများတွင်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအတွက်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ flowchart ကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။
Flowidized-bed Jet Mill WP လိုင်း၏ဇယားကွက်
၁။ ကြိတ်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းသည် fluidized bed-jet ဂျက်ကြိတ်စက်၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုမြင့်မားစွာထိရောက်စွာအသုံးပြုသည်။ အမှုန်အရွယ်အစားဖြန့်ဖြူးသည်မှာတူညီသည်။
၂။ အစာကျွေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်လေထုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအနုတ်နှင့်အတူဖြစ်သည်။ ဖုန်မှုန့်ထွက်ပေါ်လာခြင်းမှကာကွယ်ရန်အိပ်ဇောဖြူကိုထည့်သည်။
၃။ ပထမနှင့်နောက်ဆုံးရောစပ်မှုနှစ်ခုစလုံးသည် screw နှစ်ခုရောနှောထားသောအလွှာသို့မဟုတ်အလျားလိုက်လိမ်ဖဲကြိုးရောနှောခြင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ရောစပ်ခြင်းကိုလုံလောက်ပြီးအချိုးကျစေသည်။
5.The system တစ်ခုလုံးကို remote PLC control ဖြင့်ထိန်းချုပ်သည်။ အဆင်ပြေသောစစ်ဆင်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, အော်တိုပစ္စည်းကိရိယာလည်ပတ်မှု
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးသည်။ ၎င်းသည်အခြားလေထုအဆုတ်အအေးပေးစက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၃၀% မှ ၄၀% သောစွမ်းအင်ကိုချွေတာနိုင်သည်။
၇။ ၎င်းသည်ကြိတ်ဆုံနှင့် viscous ပစ္စည်းများအတွက်ခက်ခဲသောမြင့်မားသောရောနှောခြင်းအချိုးအစားများကိုကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောစီးဆင်းမှု - အစီအစဉ်အတွက်အားသာချက်များ
A. စဉ်ဆက်မပြတ်မော်ဒယ်，အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အသုံးချခဲ့သည် (စိုက်ပျိုးရေးဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကြံပြုထားသောထုတ်ကုန် QDF-400)
1 ။ ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူနှင့်ကုန်ချောထုတ်ကုန်များအကြားပိုက်လိုင်းချိတ်ဆက်မှုကဖုန်မှုန့်များကိုယိုစိမ့်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ ဖုန်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိပါ။
2.Twin ဝက်အရောစပ်သည်ကြာရှည်ခံသောလှုပ်ခြင်းနှင့်ဝက်ဘ်ဒီဇိုင်း has ရှိပြီးအရာဝတ္ထုများကိုလုံး ၀ ရောနှောခြင်းနှင့်လှည့်ခြင်းလုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင်ကျရောက်ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်သည်။
ခဆက်တိုက်ထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးပြုသောအဆက်မပြတ်သောမော်ဒယ် (QDF-400 Horizontal spiral ဖဲကြိုးရောနှောဒီဇိုင်း)
1 .Raw ပစ္စည်းပစ္စယရောနှောလှံတံကိုဒီဇိုင်းရှိပြီး, အချောချောမွေ့မွေ့ပစ္စည်းစီးဆင်းမှုကိုစောင့်ရှောက်ရန်အောက်ခြေမှီတိုင်အောင်ဝက်အူအလုံအလောက်ရှည်လျားသည်။
2. အလျားလိုက်အလျားလိုက်လိမ်ဖဲကြိုးရောနှောအားသာချက် - အချောထုတ်ကုန်တွင် adjuvant သို့မဟုတ်အခြားဓာတုပစ္စည်းများထည့်ရန်လိုအပ်သည့်ထုတ်ကုန်အချို့ကိုပြုလုပ်ရန်အဆင်ပြေသည်။ ထိုအခါရောစပ်အများကြီးပိုကောင်းနှင့်အမွှာ screw နှစ်ခုရောနှောထက်ပိုမိုတိကျသည်။ Twin screw ရောနှောခြင်းထက်ခန္ဓာကိုယ်အမြင့်ကိုတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။
C. စဉ်ဆက်မပြတ်မော်ဒယ် mass အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည် (QDF-600 Twin screw နှစ်ခုရောနှောဒီဇိုင်း)
ပထမဆုံးရောနောက်ဆုံးရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောမရောရောရောရောအရောအပြန်အတတပြန်အတဖွတ်တည်းတစည်းတိုက်တွန်းအားပေးနေကြတာပါ။ conical design သည်ပစ္စည်းကိုချောချောမွေ့မွေ့စီးဆင်းစေသည်။
b အသုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောရိုးရှင်းသောပုံစံ (QDF-400 အထက်အစာကျွေးခြင်းနည်းလမ်း)
အားသာချက်: ဆိုင်ကလုန်းခွဲထုတ်သူနှင့်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူ - ပစ္စည်းစုဆောင်းခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်တုန်ခါမှုမီတာကိုကုန်းတွင်းပိုင်းသို့ထည့်ပါ။
အသုတ်ထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးပြုသော E.Simplified Model (QDF-400 အောက်နို့တိုက်ကျွေးရေးမုဒ်)
အားသာချက်: ဆိုင်ကလုန်းခွဲထုတ်ခြင်း - ကုန်ကြမ်းစီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းကိုလူစုခွဲရန်နှင့်ပစ္စည်းစုဆောင်းခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်လမ်းခွဲပြီးနောက်နောက်ထပ်ဆိုင်ကလုန်းခွဲထုတ်ခြင်းကိုထပ်မံထည့်သွင်းပါ။
ပါကစ္စတန်စိုက်ပျိုးရေးစက်ရုံ၊ ပိုးသတ်ဆေးများနှင့်ပေါင်းသတ်ဆေးများအမှုန့်ကြိတ်ခြင်း၊ QDF-400 WP အဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်သည့်လိုင်းတစ်ခု၊ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် ၄၀၀kg / h၊ အမှုန်အရွယ် D90: 45μm
မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးစက်ရုံ၊ ပိုးသတ်ဆေးများနှင့်ပေါင်းသတ်ဆေးများမှအမှုန့်ကြိတ်ခြင်း၊ QDF-400 WP ၏အစုတစ်ခုသည်ရိုးရှင်းသောထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ၊ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား ၄၀၀kg / h၊ အမှုန်အရွယ် D90: 30μm
အီဂျစ်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးစက်ရုံ၊ ပိုးသတ်ဆေးများနှင့်ပေါင်းသတ်ဆေးများအမှုန့်ကြိတ်ခြင်း၊ QDF-400 WP အဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်သည့်လိုင်းတစ်ခု၊ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား ၄၀၀kg / h၊ အမှုန်အရွယ် D90: 20μm
၂။ Kunshan Qiangdi စက်ရုံမှဖောက်သည်များစက်ရုံသို့တင်ပို့ရန်ဘွတ်ကင်လုပ်ပါ။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊
၁။ ကုန်ပစ္စည်းအား ၀ ယ်သူအားအသေးစိတ်မိတ်ဆက်ပေးရန်၊ ၀ ယ်သူ၏မေးခွန်းကိုသေချာစွာဖြေပါ။
ကဏ္ different အသီးသီးရှိသုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အထူးလိုအပ်ချက်များအရရွေးချယ်ရန်အစီအစဉ်များချမှတ်ပါ။
အရောင်း ၀ န်ဆောင်မှု
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများ၏စိုးရိမ်မှုများကိုလျှော့ချရန်ထောက်ထားစာနာသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါ။
၂။ ကုန်ပစ္စည်းများရောက်ရှိပြီးနောက် ၁၂ လအာမခံချက်ပေးပါ။
၄။ ပစ္စည်းကိရိယာများကိုတပ်ဆင်ပြီး debug လုပ်ပါ။
ပထမ ဦး ဆုံးလိုင်းအော်ပရေတာကိုလေ့ကျင့်ပါ။
၁) ။ ပစ္စည်းအားလုံးတင်ပို့ခြင်းမပြုမီ QiangDi အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်အောင်မြင်စွာစမ်းသပ်ပြီး။
2) ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပစ္စည်းကိရိယာများအားလုံးအတွက်တစ်နှစ်အာမခံနှင့်တစ်သက်တာရောင်းချပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးပါသည်။
၄) ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများသည်စက်ရုံကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက်သင်၏စက်ရုံသို့သွားမည်၊ ပစ္စည်းကိရိယာများသည်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်နိုင်သည့်အထိပြန်မလာနိုင်တော့ပါ။
2. Q: အခြားပေးသွင်းသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသင်၏သာလွန်ထူးကဲမှုသည်အဘယ်နည်း။
၁) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်ဂျင်နီယာများသည်သင်၏ကုန်ကြမ်းအမျိုးအစား၊ စွမ်းရည်နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အသင့်တော်ဆုံးသောဖြေရှင်းချက်ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
2) ။ Qiangdi တွင်နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသောနည်းပညာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအင်ဂျင်နီယာများစွာရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစွမ်းရည်သည်အလွန်စွမ်းအားရှိပြီးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနည်းပညာအသစ် ၅-၁၀ တိုးတက်စေနိုင်သည်။
၃) ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးရှိ Agrochemical၊ ပစ္စည်းအသစ်၊ ဆေးဝါးနယ်ပယ်တွင်ကုမ္ပဏီကြီးများစွာ ၀ ယ်ယူသည်။
၃။ Q: စက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းအတွက်မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သနည်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာမခံမူဝါဒကဘာလဲ?
အဖြေ: ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏စီမံကိန်းနေရာသို့အင်ဂျင်နီယာများကိုစေလွှတ်ပြီးစက်တပ်ဆင်ခြင်း၊ အစပျိုးခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းလုပ်ငန်းခွင်၌နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များနှင့်ကြီးကြပ်မှုများကိုပြုလုပ်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တပ်ဆင်ပြီးနောက် ၁၂ လ (သို့) ပေးပို့ပြီး ၁၈ လအာမခံပါသည်။
- ၀ န်ဆောင်မှုပေးပြီးသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များအတွက်တစ်သက်တာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏စက်ရုံများတွင်စက်တပ်ဆင်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်စက်အခြေအနေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမည်။
၄။ Q: ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများကိုလုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့လေ့ကျင့်ရမည်နည်း။
အဖြေ: အသေးစိတ်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသင်ကြားပို့ချသည့်ရုပ်ပုံများကို၎င်းတို့အားလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အတွက်သင်ပေးပါမည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်တပ်ဆင်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများကသင်၏ ၀ န်ထမ်းများအား site ပေါ်တွင်သင်ကြားပေးလိမ့်မည်။
၅။ မေး။ ။ ဘယ်တင်ပို့မှုကိုသင်ကမ်းလှမ်းပါသလဲ။
အဖြေ: သင်၏တောင်းဆိုချက်အပေါ် မူတည်၍ FOB, CIF, CFR စသည်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။
အဖြေ: မျက်မှောက်၌ T / T, LC စသည်တို့
၇။ သင်၏ကုမ္ပဏီဘယ်မှာလဲ။ ကျွန်တော်အဲဒီကိုဘယ်လိုသွားလည်လို့ရမလဲ
အဖြေ: ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ရှန်ဟိုင်းနှင့်အနီးဆုံးဖြစ်သောတရုတ်နိုင်ငံ၊ Jiangsu ပြည်နယ်၊ Kunshan တွင်တည်ရှိသည်။ သင်သည်ရှန်ဟိုင်းလေဆိပ်သို့တိုက်ရိုက်ပျံသန်းနိုင်သည်။ ငါတို့ကိုလေဆိပ်ဒါမှမဟုတ်ရထားဘူတာမှာခေါ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ရှေ့သို့ GMP FDA အရည် - အိပ်ရာဂျက်စက်
နောက်တစ်ခု: QDF-400 WP အဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်မှုစနစ် ၄၀၀ ကီလိုဂရမ်
ဂျက်လေယာဉ်များ၏ထုတ်လုပ်မှုစဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်မှုစနစ် QDF-400 WP
အမှတ် ၃၁၈၊ Youde လမ်း၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာဇုန်၊ Kunshan City, Jiangsu, China
Whatsapp / Wechat / ဖုန်း: